Soo dejisan Babylon 10.5.0.11 – Vessoft
Soo dejisan Babylon
Baabuloon – dictionary caan ah elektaroonik ah oo taageero weyn luqadaha. Software wuxuu kuu ogol yahay inuu turjumo erayo hal hal, weedho iyo qoraalka buuxa. Baabuloon ku jira tiro badan oo ah erayada, entries dictionary, weedho, tibaaxaha-suuq ah, gaabiyey, antonyms, micne ah, joogay hubiyo iwm software ayaa awood u leh inuu turjumo dukumentiyada bogagga web, iyo la socoshada ciidamada in lagu daro browser turjumaadda ah. Baabuloon ka mid ah qaamuusyada mowduuc iyo muujinta diinta lacagta taariikhda iyo nidaamka dhacdooyinka hadda.
Qaamuus elektaroonik ah xoogbadane
Tarjamada dokumentiyo iyo bogagga internetka
Shaqo diinta Lacagta
Babylon Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... Maxima 5.37.3
English, Українська, Français, Español... Auslogics Anti-Malware 1.8
Antiviruses Qalab waa la jaan qaada software ah si aad u ilaaliso computer iyo gelineya inaad in la ogaado oo meesha laga saaro software xaasidnimo ah ama faylasha kale oo laga shakiyo.